“Wuxuu Isoo Xasuusiyaa Andres Iniesta Wakhtigiisii Ugu Qurxuda Badnaa” – Laacibnet.net
“Wuxuu Isoo Xasuusiyaa Andres Iniesta Wakhtigiisii Ugu Qurxuda Badnaa”
September 16, 2020 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO"
Weeraryahankii hore kooxda Aston Villa Gabby Agbonlahor ayaa aaminsan in kabtanka kooxda reer England Jack Grealish uu soo xasuusiyo Andreas Iniesta oo ku jira wakhtigiisa ugu quruxda badan, wuxuuna hadalkaan kusoo aadayaa xilli uu heshiis cusub u saxiixay kooxda.
Kabtanka Aston Villa ayaa soo afjaray warar xan ah oo la xiriirinayay Man United kadib markii uu shan sano oo heshiis ah qalinka ugu duugay kooxdiisa, waxeyna tani keentay inuu amaan ka helo Agbonlahor oo horay usoo maray Villa.
25-jirka tayada wanaagsan wuxuu ka mid yahay xiddigaha dhalinta yar ee xirfadda dabiiciga lagu tuhmaayo, lana rajeynayo iney gaaraan maqaam sare, waxaana si weyn loola barbardhigay Andreas Iniesta oo lagu tilmaamo xiddigaha ugu fiican khadka dhexe ee wakhtigiisa soo maray kubadda cagta.
Agbonlahor wuxuu aaminsan yahay inuusan waligiis ku koox noqon xiddig ka xirfad fiican Jack Grealish marka ay noqoto in si dabiici ah loo ciyaaro, wuxuuna tusaale usoo qaatay Iniesta oo guulo waaweyn la gaaray Barcelona & qaranka Spain.
“Jack Grealish wuxuu isoo xasuusiyaa Andreas Iniesta wakhtigiisii ugu quruxda badnaa, waligey ma arkin wax isaga la mid ah, kaliya xirfadda dabiiciga uu leeyahay” ayuu yiri Agbonlahor oo lagu casuumay barnaamijka (Breakfast) ee ka baxa idaacadda TALKSport.